पिसाब रोकेर नबस्नुस् • nepalhealthnews.com
जनस्वास्थ्य सरोकार ,काठमाडौं || प्रकाशित मिति :2018-10-11 05:16:20
पिसाब शरीरको सामान्य प्रक्रिया भएकाले पिसाबबाट शरीरका लागि अनावश्यक विकार तत्वहरु बाहिर निस्कन्छ । त्यसैले आफूलाई महसुस भएको एकदेखि दुई मिनेटभित्र पिसाब बाहिर फ्याँक्नुपर्छ । पिसाबथैली भरिने बित्तिकै स्नायुप्रणालीले त्यसको संकेत मष्तिष्कमा पु¥याउने भएकाले पिसाब फेर्न मन लाग्छ । थोरै समयमात्र पिसाब रोक्दा पनि संक्रमणको सम्भावना शुरु हुन्छ । आखिर पिसाब रोकेर बस्दा के के हुन्छ ?
मानिसहरु पिसाब केही मिनेटका लागि या लामो समयसम्म रोकेर राख्छन् । जति बढी समय तपाईं पिसाब रोकेर राख्नुहुन्छ, तपाईंको पिसाबथैलीमा त्यति नै बढी ब्याक्टेरिया विकसित हुन्छन् र स्वास्थ्य जोखिमको कारण बन्नसक्छ ।
पिसाबलाई हरेक दिन दुई घण्टासम्म रोकेर राख्नाले संक्रमणका कारण पत्थरीसम्बन्धि समस्या देखिनसक्छ । हरेक एक मिनेटमा २ मिलिलिटर पिसाब पिसाबथैलीमा जम्मा हुने भएकाले प्रति एकदेखि २ घण्टाको अन्तरमा पिसाब फेर्नुपर्छ । पिसाबथैली खाली थोरै समय ढिला गर्दा पुनः पिसाब मिर्गौलामा फर्किन थाल्छ र पिसाबमा युरिया र अमिनो एसिडजस्ता हानिकारक तत्व हुने भएकाले पत्थरी बन्न सक्ने सम्भावना बढ्छ ।
मुत्रमार्ग संक्रमणको जोखिम
पिसाब रोकेर राख्नाले मुत्रमार्ग संक्रमण ( युटिआई) हुने खतरा बढ्छ । महिलाहरुको मुत्रनली सानो र यो मलद्धार नजिक हुने भएकाले संक्रमण हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
यो एक पीडादायी ब्लाडर सिन्ड्रोम हो । यसले पिसाबथैली सुन्निन सक्छ र पीडा हुन्छ । इन्ट्रेस्ट्रिल सिस्टाइटिस हुँदा पटक–पटक पिसाब लाग्छ । तर, पिसाब भने कम आउँछ । अहिलेसम्म यसको खास कारण पत्ता लाग्न नसकेपनि डाक्टरहरुका अनुसार यो संक्रमणकै कारणबाट हुनसक्छ । यस्ता बिरामीहरु कोही त दिनमा ६० पटकसम्म पनि पिसाब गर्न जान्छन् । यसको पूर्णतः निर्मुल पार्ने उपाय छैन । तर, उपचारबाट लक्षण कम गर्न सकिन्छ ।
पिसाबसँग सम्बन्धित हरेक प्रकारका संक्रमणले मिर्गौलालाई नराम्रो असर पार्नसक्छ । मिर्गौला विफल भएका बिरामीले शरीरमा भएका विकारहरु बाहिर फाल्न नसक्ने भएकाले रगतमा युरिया र क्रियटिनिनको मात्रा बढ्दै जान्छ । यसबाट भोक कम लाग्ने, बान्ता हुने, कमजोर महसुस हुने, थकाई लाग्ने, सामान्यभन्दा कम पिसाब आउने र शरीरका भागहरु सुन्निनेजस्ता लक्षण देखापर्न सक्छन् ।
पिसाबको रंग गाढा हुने
लामो समयसम्म पिसाब रोक्नाले पिसाबको रंग अलि गाढा हुन्छ । यसरी गाढा हुने कारण पनि संक्रमण नै हो । केही खाद्यपदार्थको सेवनले पनि पिसाबको रंग गाढा हुनसक्छ । भिटामिन बी ले पिसाबको रंग रातो बनाउँछ ।
पिसाबथैलीको मांसपेशी कमजोर
लामो समयसम्म पिसाब पूर्णरुपमा फाल्न नसकेको अवस्थामा पिसाबको थैली तन्किने भएकाले यसको मांसपेशी कमजोर हुन्छ । मेरुदण्ड र मस्तिष्कको रोगका कारणले पनि पिसाबथैलीको मांसपेशी कमजोर हुन्छ ।
तनावमा हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् तनावमुक्त रहने उपायहरु
नेपालमा पहिलोपटक प्रत्यारोपण सम्मेलन शुरु